Eserese nke Vivo Nex 3 apụtala nke na -egosi ihuenyo gbara ya | Androidsis
A na-ejide ihe osise Vivo Nex 3 na ngosipụta esichara eserese
Ọ bụghị naanị Vivo na -akwadebe ihe iQOO Pro 5G n'okpuru sub-ika gị Ịgba Cha Cha, mana ọ na -edekwa flagship ọzọ. Nke ọzọ flagship na ụlọ ọrụ ahụ ga -ebido, nke anyị kwukwara na mbụ, bụ Vivo Nex 3.
Ngwa a ga -eweta ọmarịcha ngwụcha n'akụkụ akụkụ ihuenyo gị, na site n'iji ire ụtọ anyị na -ekwu ka ọ gbagọrọ agbagọ ... Galaxy S usoro si Samsung, na Huawei P30 Pro na OnePlus 7 Pro, na ee, Nex 3 ga -adị ka ndị a, mana akpọrọ nke ukwuu. E gosiputara nke a na eserese ya nke pụtara, ọ bụkwa ihe anyị ga -ekwu maka ya.
Na a na-adịbeghị anya na mmepe, iko Vivo Nex 3 gbapụtara na ntanetị. Akaụntụ Ice Universe (@UniverseIce) bụ maka igosi foto ya site na post o tinyere na Twitter ihe dịka izu atọ gara aga. Otu ihe ahụ, dịka ihe a ga -ekpughere si dị, Ọ ga-enyere aka mee ka ihuenyo na-ahụ nke ama ama 100% ma ọ bụ karịa, na ihe eserese ọhụrụ na -egosi kwekọrọ n'ihe ekwuru.
Ihe osise Vivo Nex 3 nwere ihuenyo gbara agba na igwefoto okpukpu atọ
"Ngosipụta na -agba agba" Ọ bụ ihe ihe atụ ahụ dị n'elu na -akpọ akụkụ akụkụ akụkụ akụkụ nke Vivo Nex 3, nke anaghị ahapụ ohere maka bezels ọ bụla pụtara. Na mgbakwunye, dị ka ị na -ahụ, akụkụ elu na nke ala pere mpe, naanị ndị na -ere ahịa ga -ege ha ntị.
Otú ọ dị, ahụmịhe ihuenyo nke ekwentị ga-enye kwa ụbọchị ga-enwe anyaụfụDị ka ụfọdụ ndị na -ekwu okwu na -amalite ịkọ nkọ na njiri mara nke a, na -ekwu na ọ nwere ike na -anya isi mkpebi QuadHD + yana oke akụkụ dị elu na ọ bụghị ihe na -erughị 19.5: 9. Ọ gaghị ahapụ oghere maka ihe mmetụta igwefoto n'ihu, yabụ enwere ike itinye nke a n'ime ya ma ọ bụ nọrọ na usoro mmapụta.
Ihe ọhụụ ọhụrụ Vivo pụtara na TENAA na igwefoto atọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ batrị 5000 mAh
Ihe ọzọ anyị nwere ike ịhụ na eserese a bụ modul foto okirikiri nke na -ejikọ ihe mmetụta atọ, nke sitere n'ike mmụọ nke elele igwe. Enweghị ozi na -egosi mkpebi nke ndị a, mana ọ nwere ike kpughee n'oge adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A na-ejide ihe osise Vivo Nex 3 na ngosipụta esichara eserese
Etu esi tinye asụsụ na Google Assistant